Silvia Blanch Yekupedzisira Zhizha, Lorena Franco mhosva yematsotsi | Zvazvino Zvinyorwa
Silvia Blanch Yekupedzisira Zhizha ibhuku rematsotsi nemunyori wechiSpanish Lorena Franco. Yakaburitswa mu2020 uye nderimwe remabhuku ekupedzisira emusikana uye munyori. Zano remusoro wezita kunyangarika kwaSilvia Blanch. Iyo, pasina mubvunzo, inonakidza nyaya izere nezvakavanzika, mune mashoma, asi anonakidza mavara anounzwa kuhupenyu.
Lorena Franco anoreurura kuti akagadzira nyaya iyi zvichienderana nekutsakatika kweAmerican Leah Roberts, iyo yakaitika munaKurume 2000. Franco akawedzera zvimwe zvemhosva iyi munganonyorwa yake, sekutsakatika kwaSilvia - saLeah - munzira huru. Imotokari yake chete ndiyo yakawanikwa imomo pasina kana chiratidzo kana kwaari, chokwadi chekuti kusvika zvino chisinganzwisisike.
1.2 Mabhuku naLaura Franco
2 Silvia Blanch Yekupedzisira Zhizha
2.2 Kusvetuka munguva
2.3.1 Munhu wekupedzisira kuona Silvia
2.3.2 Prime suspect
2.3.3 Alejandra, mutori wenhau
Lorena Franco chizvarwa cheBarcelona, ​​akazvarwa muna 1983. Ane zvidzidzo muhunyanzvi hwekushamisa, hwaakaita paNancy Tuñon Theatre Chikoro. Franco akavaka rakabudirira basa semutambi, zvese paTV uye muSpanish cinema, ane mafirimu akadai se: Kurova kwemoyo, Isharemu y Iye Heimlich Maneuver. Yake yazvino firimu kubudirira yakaita seye protagonist ye paharganj (Bollywood).
Lorena Franco akaratidzira kuyambuka kwake kuburikidza netsamba achishandisa kuzvishambadza kushambadzira mabasa ake. Ehezve, chikuva chechiratidziro hachizi chimwe kunze kwe Amazon. Yake yekutanga kutumira basa yaive Rungano rwemweya miviri (2015). Zvino, muna 2016, akapa mamwezve gumi emamwe mabhuku, pakati pawo anotevera kumira: Hupenyu hunofadza, Mazwi, Inguvai dzakakanganwa y Zvakaitika muTuscany (Kwete. 1 inotengeswa Amazon).
MunaGunyana 2016, akapa bhuku iro rakamupa kuzivikanwa kwepamusoro: Mufambi wenguva. Iyi novel, ine zvido zvekudanana uye sainzi yekunyepedzera, yanga iri nhamba yekutanga mukutengesa mumadhijitari fomati, zvese munyika nepasi rese. Nebasa iri munyori akatanga Nguva Trilogy, inozadzikiswa nemanovels: Yakarasika munguva (2018) uye Ndangariro yenguva (2018).
Mabhuku naLaura Franco
Rungano rwemweya miviri (Zvita, 2015)
Hupenyu hunofadza (Kukadzi, 2016)
Inguvai dzakakanganwa (Kurume, 2016)
Hupenyu hwandisina kusarudza (Kubvumbi, 2016)
Gara neni (Kubvumbi, 2016)
Mazuva angu naMarilyn (Chivabvu, 2016)
Mazwi (Chivabvu, 2016)
Kunogara kukanganikwa (Chikumi, 2016)
Maawa akatambiswa (Nyamavhuvhu, 2016)
Zvakaitika muTuscany (Gumiguru, 2016)
Iye anozviziva (Chikumi, 2017)
Mufambi wenguva (2016 / 2017)
Yakarasika munguva (Kurume, 2018)
Iyo pakati pehusiku kirabhu (Chikunguru, 2018)
Ndangariro yenguva (Mbudzi, 2018)
Ndiani anodhonza tambo (Ndira, 2019)
Chokwadi chaAnna Guirao (Kurume, 2019)
Silvia Blanch Yekupedzisira Zhizha (Kukadzi, 2020)
Wese munhu arikutsvaga Nora Roy (Kurume, 2021)
Lorena Franco anopa inonakidza yemapeji anopfuura mazana matatu azere nezvakavanzika uye zvakavanzika kubva pakutanga kusvika pakupedzisira. Iyo nyaya yakagadzwa muMontseny, taundi diki muBarcelona. Mubhuku racho muchave nezvikamu zvipfupi zvisina kuverengwa, chimwe nechimwe chazvo chine zuva pakutanga uye zita remunhu mukuru, anova ndiye anorondedzera kurondedzera akati fragment mumunhu wekutanga.
Kupera 2020, munyori akagovana pamasocial network ake izvo Zeta Studios akawana kodzero dzekuteerera dzeizvi nhema nhema. Iyi inozivikanwa kambani yekugadzira inozivikanwa nekuda kwemapurojekiti akabudirira, pakati pavo akateedzana Elite kana mafirimu: Mamita matatu kumusoro kwedenga, Ndinokuda y Superlopez.
Iyo inoverengeka inotanga muna 2018, gore mushure meiyo mwaka wezhizha apo Silvia Blanch akanyangarika. Mutori wenhau Alejandra Duarte ndiye ari kutarisira kuita chiyeuchidzo chekuyeuchidza nezvedambudziko risinganzwisisike. Alex - sekuzivikanwa kunoitwa nemutori wenhau mudiki uyu - anofanirwa kuenda kuguta rekumusha kwaSilvia kuti anobvunzurudza vadikani vake nevagari vemo nezve zvakaitika.
Montseny iguta rakanyarara iro Silvia aigara nemhuri yake kusvika iye ashaike, ndokusaka vagari varo vese vaizviziva. Aive wekupedzisira kumhuri yeBlanch, mukadzi wechidiki akangwara uye ane chivimbo, aine ramangwana rakabudirira pabasa rake nyowani uye kufambidzana kwemakore.
Zhizha rekupedzisira re ...
Silvia Blanch Yekupedzisira Zhizha inotanga muna2017, ichirondedzera kunyangarika kwemusikana. Ipapo inoiswa gore rinotevera, Alex paanopihwa wongororo yechiitiko chakataurwa. Ipo vatambi vachirondedzera nyaya, famba uchienda kune zvakapfuura, zvese kusati kwanyangarika, uye kana zviitiko zvichizounza nhamo zvikaitika.
Uyewo, iro zano rinochinjawo kusvika 2020. Ikoko hupenyu hwaAlex hunoratidzwa mushure mekuferefetwa uye rakazotevera kuburitswa kwebasa rakaitwa.
Mune nhoroondo, Lorraine Franco inoratidzira akanyatsogadzirwa mavara. Zviito zvavo zvekubatana zvakanyatsobatana, iyo inopa kuomarara kunoverengeka. Zvakavanzika zviripo murondedzero iri kupa akasiyana maonero nemaonero asingatarisirwi ayo anokwanisa kubata muverengi kudzamara vamutungamira kumagumo anoshamisa. Pakati peizvi, vanoratidzika
Munhu wekupedzisira kuona Silvia
Chitsauko chekutanga cheiyi nyaya inonakidza inotaurwa nemukadzi, uyo anotyaira nzira kuna Montseny mumotokari yake. Anovhunduka nekugamuchira mashoko anotyisa ekuti ane gomarara. Ari munzira, ari kure anokwanisa kuona nekuona mota yaBlanch; paanomira zvishoma kuti adzivise mota, anoona siluetti mbiri musango, uye anofungidzira kuti ndiSilvia naJan - mukomana wake kweupenyu hwese.
Anoenderera mberi nerwendo rwake, asingakoshese mamiriro acho, nekuti aifunga kuti kwaive kudanana pakati pevadiki vechidiki. Mushure meichi chiitiko, mukadzi akatarisa pachokwadi chake chinosuruvarisa.
Munhu wekutanga akabvunzurudzwa nemapurisa semunhu mukuru aifungidzirwa aive Jan, mukomana waSilvia. Izvi zvinoitika nekuda kwekutaura kwemukadzi uya akasangana nemotokari yaBlanch pavenue ndokuona vanhu vaviri vaaifungidzira kuti vaive Silvia naiye. Asi zvaive zvisingaite kuongorora kuti Jan aive munhu iyeye, nekuti aive neakanyanya alibi, izvo zvakasimbiswa.
Alejandra, mutori wenhau
Alejandra mutori wenhau wechidiki uye protagonist wenyaya yacho. Iye ari pamusoro pekugadzira chinyorwa pamusoro pekurangarira kwegore rekutanga kunyangarika kwaSilvia. Izvo zvakatanga sebasa rakareruka pane yakavharwa kesi, zvachinja nekusvika kwake mutaundi, nekuti chimiro chake chakakonzera kushushikana kukuru mumhuri uye nevanhu.
Alex, akafadzwa nemaitiro emunhu wese, anomurega aine hunhu hwenhau kuti abude uye afunga kuongorora zvekare. Mukutsvaga data nyowani, anosarudza kubvunzurudza vanhu vakati wandei, akatanga naJan, uyo akamusiya achishamisika kubva pakutanga kuona, uye anoita kuti azvidembe kusangana naye mumamiriro ezvinhu akadaro. Alex achaferefeta asingatyi, kudzamara asvika pazasi penyaya iyi isinganzwisisike.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Silvia Blanch Yekupedzisira Zhizha